အွန်လိုင်းအရောင်းအဝယ်: သင့်အလားအလာ၏ ၀ ယ်ယူမှုများကိုရှာဖွေခြင်း | Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, ဇန်နဝါရီလ 8, 2017 တနင်္ဂနွေ, ဇန်နဝါရီလ 8, 2017 Frank Bria
ငါကြားရလေ့ရှိသည့်မကြာခဏမေးခွန်းတစ်ခုမှာ - ဆင်းသက်ရန်စာမျက်နှာသို့မဟုတ်ကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအတွက်မည်သည့်သတင်းကိုအသုံးပြုရမည်ကိုသင်မည်သို့သိသနည်း။ ဒါဟာမှန်ကန်တဲ့မေးခွန်းပါ။ မှားယွင်းသောမက်ဆေ့ခ်ျသည်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်း၊ မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောပေးဆပ်မှုကိုပင်ကျော်လွှားလိမ့်မည်။
အဖြေသည်သင်ဝယ်ယူရန်အလားအလာရှိသည့်နေရာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ မည်သည့်ဝယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်မဆိုအဓိကအဆင့် ၄ ခုရှိသည်။ မင်းရဲ့အလားအလာကိုဘယ်မှာသိနိုင်မလဲ။ သင်သည်ထိုသူတို့ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် အစပျိုးဝယ်ယူ။
၀ ယ်သူအစုလိုက် ၀ င်ရောက်သူများအတွက် ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနှင့်ဆိုင်သောဥပမာကိုကြည့်ကြစို့။
Mall တွင် Triggers ၀ ယ်ခြင်းအကြောင်းလေ့လာခြင်း
အကောင်းဆုံးစျေးဝယ်ခြင်းအတွေ့အကြုံများသည်ကုန်တိုက်တွင်ရှိသည်။ သူတို့ကသင့်ကိုလမ်းလွဲနေပြီးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ၀ ိညာဉ်တစ်ယောက်ထံမှဖောက်သည်တစ်ယောက်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်အလွန်တုန်လှုပ်ချောက်ချားသည်။ ဒီတော့သူတို့ကခင်ဗျားနဲ့သူတို့ဘယ်လိုအပြန်အလှန်ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာကြည့်ကြစို့။ ၀ ယ်ခြင်းအစစ်အမှန်ကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ခန်းစာအနည်းငယ်။
မင်းအရင်ကတစ်ခါမှမရခဲ့ဖူးတဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုတွေ့ပြီ၊ ပြီးတော့သင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအပြင်မှာရှိနေမယ်ဆိုတာစဉ်းစားပါ။ သင်သည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့်သူတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုသိရန်ကြိုးစားနေသည့်ဆိုင်းဘုတ်ကိုကြည့်နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုလုပ်ငန်းနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်ရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီသင်ကအခြေခံအားဖြင့်ဖြစ်သည် ရက်ရာဇာ.
၎င်းသည်ခိုင်မာသောအသုံးအနှုန်းဖြစ်သော်လည်းမည်သည့်အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်မှု၏ကန ဦး အစိတ်အပိုင်းကိုမဆိုရှင်းပြရန်ကောင်းသည်။ ဤဝေါဟာရသည်သင်၏ဝဘ်ဆိုက်သို့ ၀ င်ရောက်လာပြီးချက်ချင်းပြန်ပေါ်လာသောလူများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဟူသောဝေါဟာရကို 'မြင့်သောခုန်နှုန်း' ဒီဖြစ်ပျက်ကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည်။ ဤအရာများသည် ငွေချေးဤအဆင့်တွင်ပင်အမှန်တကယ်အလားအလာမရှိပါ။ သူတို့ဟာကြိုက်နှစ်သက်ရာအရောင်းအ ၀ ယ်ဆီကိုလာမယ့်လူတွေပါ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဖောက်သည်တွေတိုးများလာတာနဲ့အမျှဒီအဆင့်ကိုစလိုက်ပါတယ်။
ချေးငှားသူနှင့်မည်သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပုံ -“ ပိုမိုလေ့လာပါ”
မည်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာတွင်မဆိုအရည်အချင်းပြည့်မှီဆုံးသောအလားအလာအထိပထမဆုံးအကြိမ်ခေါ်ယူခြင်းသည်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည် ပိုမိုသိရှိရန်။ ဤအခြေခံဖိတ်ကြားချက်သည်သင်မျှော်လင့်နိုင်သည့်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသင်တောင်းဆိုနိုင်သောနိမ့်ဆုံးကတိက ၀ တ်ဖြစ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးပိုမိုရှာဖွေရန်အချိန်ယူရုံသာဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ပိုမိုသိရှိရန် သတင်းအချက်အလက်ပေးမည့်အလားအလာများရရန်ခေါ်ဆိုမှုသည်အရေးအကြီးဆုံးသောအွန်လိုင်းမဟာဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားလုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် ပိုမိုသိရှိရန် မဟာဗျူဟာ။ သင့်ရဲ့အလားအလာကိုသူတို့အရင်ကမသိခဲ့သည့်အရာတစ်ခုခုကိုသင်ကြားပေးသောအခမဲ့ကမ်းလှမ်းမှုသည်၎င်းသည်ဖြစ်သည် ပိုမိုသိရှိရန် ခေါ်ဆိုရန်။
ဤ ပိုမိုသိရှိရန် သင်ကြားနေသည့်အရာနှင့်စပ်လျဉ်း။ ခေါ်ဆိုမှုများကိုဖော်စပ်ဖော်ပြနိုင်သည်။ ဥပမာ, CrazyEgg ၏ဝက်ဘ်ဆိုက် ကပြောပါတယ် ကျွန်ုပ်၏ HeatMap ကိုပြပါ ဒါကသူတို့ရဲ့အလားအလာကိုသူတို့အရင်ကမသိသေးတဲ့အရာတစ်ခုကိုသင်ပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။
သင်ရှာဖွေနေသည့် ၀ ယ်ယူမှုသည်သင်၏တုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည် ပိုမိုသိရှိရန် ခေါ်ဆိုရန်။ သူတို့ကသူတို့လက်ကိုမြှောက်ပြီးမင်းကိုဆက်ရောင်းဖို့ခွင့်ပြုနေတယ်။
သင့်ရဲ့အလားအလာကတုန့်ပြန်မှုရှိမယ်ဆိုတာသူတို့အနေဖြင့်တကယ်လေ့လာချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည် ပိုမိုသိရှိရန် ခေါ်ဆိုရန်။ မင်းရဲ့အလားအလာကဝယ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့မင်းထင်ရင်သူတို့ကိုပေးပါ အခုဝယ်ပါ သို့မဟုတ်တစ် အဲဒါကိုပြင်ပါ သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အညီပိုပြီးကြောင်းအော်ဟစ် -to-action ကို။
သင်ခန်းစာကို: သင်တစ်ခုခုလိုအပ်တယ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ရဲရင့် သင်တစ် ဦး မှဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာရှင်းပြရန် ငွေချေး.
နောက်ကျော Mall သို့
စတိုးဆိုင်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်မင်းကိုဆွဲဆောင်တယ်လို့မင်းယူဆတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းဘာဖြစ်နေတာလဲ၊ ဘာရောင်းတာလဲဆိုတာသိဖို့ကြိုးစားနေလို့ပဲ။
နောက်ဘာဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်။ အရောင်းဝန်ထမ်းတစ် ဦး ကသင့်ထံချဉ်းကပ်ပြီးသင်တစ်ခုခုရှာနေလားဟုမေးသည်။ သင်၏တုံ့ပြန်မှုသည်အလိုအလျောက်နီးပါးဖြစ်သည်။
“ ငါကြည့်တာပဲ။ ”
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ကိုင်နေသော်လည်းသင်၌ ၀ ယ်ရန်တစ်ခုခုရှိမရှိကိုမသိရှိသည့်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ကြည့်နေသည်။
သူတို့ဘာကိုလိုချင်တာလဲ၊ ဘာလိုချင်လဲဆိုတာမသိသေးတာကြောင့်သူတို့ကပဲကြည့်နေကြတယ်။ အရာအားလုံးကိုသင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည့်နည်းဖြင့်ဖော်ထုတ်ခြင်းသည်စတိုးဆိုင်၏အလုပ်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်ယခုအချိန်တွင်အရောင်းဝန်ထမ်းတစ် ဦး နှင့်ထိတွေ့ဖွယ်မရှိချေ။
A ကြည့်ပါ ပထမ ဦး ဆုံးတွေ့ကြုံတကယ်စိတ်ဝင်စားသည်။ အမှုအရာသည်ဤအဆင့်တွင်အလွန်စိတ်ခံစားမှုနှင့်အမြင်အာရုံဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်စတိုးဆိုင်တစ်ခုသည်ကုတင်၊ အိပ်ရာ၊ ပရိဘောဂများဖြင့်သူတို့၏အိပ်ရာကိုထုတ်ပစ်လိုက်ခြင်းဖြင့်သင်၏အိမ်တွင်သင်စိတ်ကူးနိုင်သည်။
မင်းလည်းမင်းကိုကူညီရလိမ့်မယ် ကြည့်ပါ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပြီးနောက်သူတို့၏ဘဝကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
ဤအဆင့်တွင်စောလွန်း။ အတင်းအကျပ်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည့်အရောင်းဝန်ထမ်းတစ် ဦး သည်ဖောက်သည်များတိုးပွားလာမည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့သည် လိုက်၍ သတ်ကြလိမ့်မည်။
သို့သော် ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာသူတို့သည်ထိုစတိုးဆိုင်၌တစ်ခုခုထွက်နေသည်ဟုသူတို့မတွေးနိုင်ပါကမကြာမီသူတို့ထွက်ခွာတော့မည်ဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့အချိန်ဟာအဖိုးတန်ပြီးဒီစတိုးဆိုင်ထဲကတစ်ခုခုကအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိရင်ဆက်လုပ်သွားမှာပါ။
ရှာဖွေသူနှင့်မည်သို့ဆက်ဆံရမည်နည်း -“ သာ၍ ကောင်းသောဘဝ”
ဤခေါ်ဆိုမှုသည်တီဗွီကြော်ငြာများတွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အကျွမ်းတဝင်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏အိပ်ရာပေါ်မှထပြီးချက်ချင်းတစ်ခုခုဝယ်ရန်မဖြစ်နိုင်သောကြောင့်၊ ကြီးသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်အများစုကသင်သူတို့၏ကုန်ပစ္စည်းကို ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်ကြိုးစားသည်။
သင်တွေ့ဖူးသမျှဘီယာလုပ်ငန်းတိုင်းနီးပါးကိုစဉ်းစားပါ။ မင်းပိုချစ်မယ်၊ ပိုချမ်းသာမယ်၊ သငျသညျစိတ်ကူးရ။
သေချာတာပေါ့ ပိုကောင်းတဲ့ဘဝ ပြaနာကိုဖြေရှင်းနေတယ်၊
ဤနေရာတွင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာသည်သင်၏ပြီးပြည့်စုံသောဖောက်သည်အတွက်မည်သည့်အရာကိုမဆိုပိုမိုကောင်းမွန်သောဘ ၀ ကိုဖန်တီးပေးသည့်အနေဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုအမှတ်တံဆိပ်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီခေါ်ဆိုမှုသည်သင့်အပေါ်အာရုံစိုက်စေသည် ခံစားခဲ့ရ လိုအပ်ပါတယ်။ သင်လိုအပ်သည်။ သို့သော်နှုတ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဒါဟာစိတ်ခံစားမှုအဆင့်မှာလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါ ကြည့်ပါ အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်သည် ပိုကောင်းတဲ့ဘဝ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကမင်းကိုပြတာကိုလိုချင်ကြလို့ပါ။ မင်းရဲ့အလားအလာကိုသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ကူညီဖို့အရေးကြီးတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခု - စကားပြောမပြောရင်တောင်မှ။
အကယ်၍ သင်၏မျှော်လင့်ချက်သည်သင်ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်ကိုသူတို့ချက်ချင်းမသိလျှင်သို့မဟုတ်မယုံလျှင်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘဝကိုမည်သို့ဖန်တီးနိုင်ကြောင်းပြသရန်လိုအပ်သည်။
သင်၏အလားအလာကိုသင်ပိုမိုမြန်ဆန်သောအသက်တာကိုထောက်ပံ့နိုင်မည်ဟုမည်မျှလျင်မြန်စွာယုံကြည်နိုင်ကြောင်းပေါ် မူတည်၍ သင်၌ရှိသည် စိတ်ဖိစီးမှုကင်းသောဘဝကိုရယူပါ or ပိုမိုသုံးဖြုန်းငွေရှိ ခေါ်ဆိုရန်။ ၎င်းသည်ဘီယာရောင်းဝယ်မှုနှင့်တိုက်ရိုက်ရောင်းချသည့်ကုမ္ပဏီနှင့်ညီမျှသည်။
ဒီမှာဝယ်ယူသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်နေပါတယ် ပိုကောင်းတဲ့ဘဝ ခေါ်ဆိုရန်။ ထိုအရာကိုတုံ့ပြန်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့သည်သင်၏လက်ကိုမြှောက်ပြီးသင်ပေးနေသောအရာကိုအမှန်တကယ်လိုချင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်၊ ဘယ်လောက်ကုန်ကျတယ်ဆိုတာကိုသူတို့မသိကြဘူး။ သင်ရောင်းချမှုကိုပိတ်ရန်ညာဘက်ဝင်ငွေလိုအပ်ဆဲဖြစ်သော်လည်းယခုအချိန်တွင်သင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။
သင်ခန်းစာကို: သင်ရူပါရုံကိုခြယ်သဖို့လိုအပ်ပါတယ် ကြည့်ပါ သင်တတ်နိုင်သမျှ၏ဖော်ပြချက်နှင့်အတူ သူတို့ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပစ်.
ခင်ဗျားသဘောကျတာကမင်းလိုချင်တာလားလိုချင်တာပဲဆိုတာမင်းသိတယ် ဤအရာသည်သင်စင်ပေါ်မှတစ်ခုခုကိုကောက်ယူ။ ဆန်းစစ်မည်ဆိုလျှင်အချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤအချက်မှာသင်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်နေကြသည်။ သင်စျေးနှုန်းကိုကြည့်သည်၊ tag ကိုကြည့်ပြီး၎င်းတွင်ရှိသောအရာများကိုကြည့်သည်။
မှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်မှာဤအချက်မတိုင်မီသင်အရောင်းဝန်ထမ်းတစ် ဦး နှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုရန်စိတ် ၀ င်စားမည်မဟုတ်ပါ။ ပြီးတော့ကုန်ပစ္စည်းရဲ့အသွင်အပြင်ကိုသင်စိတ်မဝင်စားဘူး။
စတိုးကတကယ်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ် စျေးဝယ် လွယ်ကူအောင်သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက် align ။ ဖတ်ရလွယ်အောင်၊ ရှာရလွယ်အောင်လုပ်ပါ
ဈေးဝယ်သူနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု -“ အဲဒါကိုပြင်ပါ”
အလားအလာတစ်ခုသည် ၀ ယ်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးမီသူတို့သည်မကြာခဏပြtheirနာများကိုသာဖြေရှင်းလိုကြသည်၊
အဆိုပါ အဲဒါကိုပြင်ပါ call-to-action သည်သင်၏အလားအလာပြproblemနာကိုဖယ်ရှားပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။
လျင်မြန်စွာအညွှန့် အရမ်းကောင်းတယ် အဲဒါကိုပြင်ပါ သူတို့ရဲ့ပင်မစာမျက်နှာပေါ်မှလုပ်ဆောင်မှုကိုခေါ်ပါ။
အဲဒါကိုပြင်ချင်လား။ ပြီးရင် sign up လုပ်ပါ။
အဆိုပါ အဲဒါကိုပြင်ပါ call-to-action သည်အရောင်းအဝယ်လုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်မကြာခဏပြုလုပ်သည်။
သင်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာကိုအသုံးပြုနေသည်ကိုတွေ့လိမ့်မည် အဲဒါကိုပြင်ပါ နီးပါးချက်ချင်း -to-action ကိုခေါ်ပါ။ သင်ဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားနေသည့်ပြtheနာသည်အလွန်သိသာထင်ရှားပြီး၎င်းကိုမိတ်ဆက်ပေးရန်လိုအပ်လျှင်၎င်းသည်အဆင်ပြေပါသည်။
ဒါပေမယ့်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်တွေအတွက်တော့ဒီပြproblemနာကမရှင်းနိုင်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလားအလာများကနာကျင်မှုကိုခံစားရလေ့ရှိသည်၊ သို့သော်ထိုနာကျင်မှုမှမည်သည့်နေရာမှလာသည်ကိုမသိပါ။ သင်သည်သင်၏အလားအလာကိုရှင်းပြရန်လိုကြောင်းတွေ့ရှိပါကသင်သည်ယင်းသို့ခုန်ချလိမ့်မည် အဲဒါကိုပြင်ပါ -to- အရေးယူလွန်းလျင်မြန်စွာ။
အဆိုပါ ယ်လို့ သူ / သူမပြproblemနာကဘာလဲဆိုတာသူသိတယ်။ ထိုပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်သူသို့မဟုတ်သူမအားအားပေးသည့်မည်သည့်ဘာသာစကားမဆိုအရည်အချင်းပြည့်မှီနိုင်သည်။
မကြာခဏဆိုသလို အဲဒါကိုပြင်ပါ ခေါ်ဆိုမှုများသည်အုပ်စုများတွင် ၄ င်းတို့၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောအရာကိုရွေးချယ်ရန်အလားအလာရှိသောအုပ်စုများမှလာသည်။ ဒီနေရာမှာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာသည်လိုအပ်ချက်အစိတ်အပိုင်းများအားဖြင့်အလားအလာများကိုခွဲခြားရန်ဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင်ဝယ်ခလုတ်သင့်ရဲ့နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖြစ်ပါတယ် အဲဒါကိုပြင်ပါ ခေါ်ဆိုရန်။ ၎င်းကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏အလားအလာသည်လက်ကိုမြှောက်လိုက်ပြီးအမှန်မှာသူတို့သည်သင်ဖော်ပြနေသည့်နာကျင်မှုကိုပြသပြီး၎င်းကိုပျောက်သွားရန်နည်းလမ်းတစ်ခုလိုချင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ အခုသင်ဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ။
သင်ခန်းစာကိုဖြေ - မင်းကိုတင်ပြရမယ် အကျိုးခံစားခွင့် သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောနည်းဖြင့်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုဖော်ပြသည် ယ်လို့ - ဤအချက်မှာဖြစ်ရပ်မှန်များ၊
နောက်ကိုလိုက်သင့်သောအရောင်းစကားဝိုင်းနှင့်အတူကူညီချင်တယ် အဲဒါကိုပြင်ပါ -to- အရေးယူ? ဤအခမဲ့ High-Ticket Sales Script ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲ။ ပိုမိုမြင့်မားသောလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုပိတ်ရန်ကွက်လပ်များကိုဖြည့်ပါ။
High-Ticket Sales Script ကိုကူးယူပါ
ငွေရှင်းကောင်တာသို့ ဦး တည်
အကယ်၍ ထိုဆုံးဖြတ်ချက်သည်အပြုသဘောဆောင်ပါကစျေးဝယ်သူအဖြစ်မှတစ် ဦး ဖြစ်ရန်သင်၏အလားအလာသည်ပြောင်းလဲသွားသည် ဝယ်ခြမ်းသူ.
ဝယ်သူဆိုသည်မှာ ၀ ယ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
လက်လီရောင်းချသူများသည်ရှုံးနိမ့်သူနှင့်ကွဲလွဲသည့်နေရာဖြစ်သည်။ သင် ၀ ယ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သော်လည်းစတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်သင်မည်သို့ခံစားရသနည်း၊ သို့သော်ငွေရှင်းကောင်တာကိုမတွေ့ပါသလော။ ပိုဆိုးတာကသင်အဲဒါကိုတွေ့ပြီ၊ ဒါပေမယ့်မင်းကိုကူညီဖို့ဘယ်သူမှမရှိဘူးလား။
ငွေရှင်းကောင်တာကိုရှာဖွေရန်သိသာထင်ရှားစေသောလက်လီရောင်းချသူများသည်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ကြသည်။ ၎င်းသည်သိသာထင်ရှားသည့်နေရာ၌ဖြစ်စေ၊ သင်ကိုယ်တိုင်ထိုနေရာတွင်သင့်ကိုခေါ်ဆောင်သွားမည့်အရောင်းဝန်ထမ်းတစ် ဦး နှင့်လိုက်ပါသွားခြင်းဖြစ်စေ။
အခြားဘာမှအတွေ့အကြုံတစ်ခုပျက်ကွက်သည်။ သူတို့သည်သင့်ထံမှမ ၀ ယ်နိုင်ပါကသင်ဖောက်သည်များကြီးထွားလာရန်မဖြစ်နိုင်ပါ
သင့်တွင်အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးဆိုဒ်ရှိပါသလား။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သဘောတူညီမှုကိုပိတ်ရန်ခြေလှမ်းအနည်းငယ်လိုအပ်သည်။
သို့ဆိုလျှင်“ cash register ကိုမဖုံးကွယ်” ပါနှင့်။ သင့်ရဲ့အလားအလာကိုဖောက်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လာဖို့ဘယ်လိုသိတယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
၀ ယ်သူနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု -“ ယခု ၀ ယ်ပါ”
သငျသညျမွငျနိုငျ အခုဝယ်ပါ ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်ဒေသများရှိကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများ phrased ။ e-commerce catalog တွင်လုပ်ဆောင်ရန်ခေါ်ဆိုမှုကို“ Add to Cart” ဟုအရင်ဆုံးပြောနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်အခြေခံကျကျပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကသူတို့လှည်းထဲထည့်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုဝယ်ဖို့အလားအလာကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေတာ။
တခြားအချိန်တွေ, အခုဝယ်ပါ သင် ၀ ယ်လိုသည့်ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်၍ ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအသင်းဝင်ဖြစ်လာသို့မဟုတ်ငါ့အစီအစဉ်ကိုတည်ဆောက်အဖြစ်။ ဤအသုံးအနှုန်းမျိုးသည်အခြေအနေနှင့် ပို၍ သက်ဆိုင်ပြီးတိကျမှုရှိပြီးတောင်းဆိုမှုကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းဖြင့်တုန့်ပြန်မှုကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။
တခါတလေ အခုဝယ်ပါ ပိုက်ဆံမပါ ၀ င်ဘဲထုတ်ကုန်နှင့်အခမဲ့စတင်ရန်အလားအလာလိုအပ်သည်။ ဤအပြောင်းအလဲသည်“ freemium” စီးပွားရေးမော်ဒယ်များ၊ အခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းကာလရှိသည့်ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်ငွေပြန်အမ်းခြင်းတို့တွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။
ဤအမှုကိစ္စအားလုံး၌, အခုဝယ်ပါ call-to-action သည်ကျူးလွန်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်မည့်အလားအလာကိုညွှန်ပြသည်။
သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်ဖွံ့ဖြိုးရန်အချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်။ e-commerce ကိစ္စများတွင်အသုံးပြုသူမှမကြာခဏသွားနိုင်သည် ငွေချေး သို့ ဝယ်ခြမ်းသူ အလွန်လျှင်မြန်စွာဒါ စျေးဝယ်ခြင်းထဲသို့ထည့်သည် နှင့် လှည်းဝယ်ပါ သဘာဝကျပါတယ်
သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်သည်သင်၏အလားအလာနှင့်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည် အခုဝယ်ပါ အလွန်ပထမ ဦး ဆုံးအပြန်အလှန်အပေါ် call-to-action ကိုသိပ်မကြာမီလွန်းသည်။
အဲဒီအစား၊ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာကိုအရင်တည်ဆောက်ပါ အခုဝယ်ပါ အလားအလာအလားအလာပြီးနောက်သူတို့ဝယ်အားလုံးအဆင့်မှတဆင့်ပြောင်းရွှေ့သွားပြီအချက်ပြပြီးနောက် -to-action ကို။
ဤနေရာတွင် ၀ ယ်ယူခြင်းသည် ၀ ယ်ခြင်းအစပျိုးခြင်း၏အန္တိမဖြစ်သည်။ ကိုနှိပ်ပါ အခုဝယ်ပါ ခလုတ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်သိတဲ့အတိုင်း၊ မင်းရဲ့အလုပ်ကမပြီးသေးဘူး။ သငျသညျ, စင်ကြယ်သော, ပြတ်သားငွေပေးငွေယူလုပ်ငန်းစဉ်ရှိသည်, မည်သည့်နောက်ဆုံးကန့်ကွက်ကိုင်တွယ်နှင့်သင်နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ဖို့လွယ်ကူစေသည်တဲ့ထုံးစံ၌ဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်သည်။
သင့်တွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်မရှိသည့်တိုင်“ များသောအားဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းကောင်တာရှိရှည်လျားသောလိုင်းများ” ကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များများပျက်စီးခဲ့သည်။
သင်ခန်းစာကိုဖြေ - မင်းရှင်းပြဖို့လိုတယ် စီးပွားရေးဘယ်လိုကူးပြောင်းနိုင်ပုံ သင့်ရဲ့နဲ့အတူ ဝယ်ခြမ်းသူ; သင်၏ထုတ်ကုန်ကိုမည်သို့ ၀ ယ်ယူရမည်၊
၀ ယ်သောအစပျိုးခြင်းများကိုရှာဖွေရန်ခေါ်ဆိုမှုများမှလုပ်ဆောင်ချက် ၄ ခုကိုရောနှောခြင်း
ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုစီတိုင်းကိုသင့်တော်သောပရိသတ်နှင့်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုစီသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုစီနှင့်အတူဖြည်းဖြည်းချင်းယုံကြည်မှုနှင့်ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုတည်ဆောက်နေသည်။ ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည်။
သင်၏ဝယ်သူအား ၀ ယ်ရန်မတိုက်တွန်းပါနှင့် ပိုမိုသိရှိရန် ခေါ်ဆိုရန်။
ကနေသွား၏ဤဖြစ်စဉ်ကို ငွေချေး ဖြတ်. ကြည့်ပါရန် ယ်လို့ရန် ဝယ်ခြမ်းသူ ငါရွှေ့ပြောင်းလို့ခေါ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ ဒါဟာဖောက်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လာရန်ရွေးချယ်သည်အထိစီးပွားရေးနှင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းပြီးပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအဆင့်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်ရွေးချယ်နိုင်သည့်အလားအလာတစ်ခုဖြစ်သည်။
တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော်သင်သည်ဖောက်သည်များကြီးထွားလာခြင်းမဟုတ်ပါ - သူတို့သည်၎င်းတို့ကိုယ်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေသည်။ သင်လုပ်နိုင်တာကသူတို့လိုအပ်တာကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လိုတယ်။ သူတို့လိုအပ်တဲ့အခါအတိအကျ - သူတို့ ၀ ယ်လာတာနဲ့အမျှ ၀ ယ်သူအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရွှေ့ပြောင်းမှုအချက်ပြမှုကိုသူတို့သိရှိနိုင်တယ်။
ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု (၄) ခုအနက်တစ်ခုစီကိုမှန်ကန်သောပရိသတ်နှင့်အသုံးပြုရန်သင်လေ့လာသောအခါအရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုချောချောမွေ့မွေ့နှင့်အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချမှုဖြင့်သင်၏ ဦး ဆောင်မှုကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။
Frank Bria သည် High-Ticket Services Expert ဖြစ်သည်။ သူသည်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုနည်းပညာကဏ္in၌သူ၏စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ သူသည်ကုမ္ပဏီအသစ်များ၊ အချို့သည်ဒေါ်လာသန်းရာနှင့်ချီ။ ရောင်းချခြင်းနှင့်အချို့သည်မီးတောက်လောင်ခြင်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူ၏အတွေ့အကြုံတွင်တိုက်ကြီး ၅ တိုက်ရှိအကြီးမားဆုံးကော်ပိုရေးရှင်းအချို့အား၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအပေါ်အမှန်တကယ်အကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းဖြင့် ၄ င်းတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကြီးထွားစေရန်ကူညီခြင်း၊
ယခုသူသည်ထိုအတွေ့အကြုံကိုအသေးစားစီးပွားရေးကဏ္ turns သို့ပြောင်းလဲလိုက်သည်။ သူသည်အကြံပေးများ၊ စီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်အခြားကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပြီး၊ “ စီမံကိန်းအခြေခံသော” နှင့်နာရီ ၀ င်ငွေမှဝေးကွာသွားစေရန်၊ ဖရန့်ခ်၏ဖောက်သည်များသည်သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်သင်၏အချိန်ကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအမြောက်အမြားအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။
သူသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရောင်းရဆုံးစာအုပ်ဖြစ်သောစာရေးသားသူဖြစ်သည်။ သူသည်ဇနီး၊ သမီး ၃ ယောက်နှင့်အတူ Phoenix ရှိ Arizona ရှိ Gilbert တွင်နေထိုင်သည်။
၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း - ဖရန့်ခ်ျ၏ Ebook ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ - ၃ ဒဏ္Myာရီပုံပြင်များကမင်းကိုနိုးထစေနိုင်သည်